Spiekermann 8-da Tilmaam ee nooca (Infographic) | Abuurista khadka tooska ah
Lua louro | | Design Graphic
Erik Spiekermann waa mid ka mid ah qorayaasha ugu aqoonsan badan heer caalami ah. Waqti ka hor, aqoonyahankan qaab qoraalka ayaa u oggolaaday Font Dukaan faylka PDF waxbarasho aad u fara badan oo ujeedadeedu tahay inay nagu hagto isticmaalka saxda ah ee qaybaha qoraalka qaarkood.
Markaas waxaad arki doontaa, in our sawir qaadayaasha, 8-da talo bixin ee Erik Spiekermann na siinayo si loo sameeyo naqshad / naqshad wanaagsan. Feejignaan:
1 Spiekermann's 8 Tilmaamaha Noocyada Xogta
1.1 Adeegso daboollo yar yar halkii aad ka isticmaali lahayd xarfaha waaweyn
1.2 U adeegso faallooyinka xoogga saar
1.3 Isticmaal jaantuska halkii aad ka isticmaali lahayd dhaashka caadiga ah
1.4 Xigashooyinka qalooca, fadlan
1.5 Tirooyinka Elzevarian iyo tab
1.6 Had iyo jeer isticmaal ligatures
1.7 Qoraal bidix leysku raacay, WALIGAA xaq looma yeelo
1.8 Liisaska dhibcaha
Spiekermann's 8 Tilmaamaha Noocyada Xogta
Adeegso daboollo yar yar halkii aad ka isticmaali lahayd xarfaha waaweyn
Oo halkan waa inaan tilmaannaa. Beddel xarfaha waaweyn ee koofiyadaha yaryar meelahaas ay tahay inaad ku soo gaabiso gaabinta ama soo gaabin, sida ku saabsan CD-ROM ama qaababka faylasha ee PNG, JPEG, PDF… Sideen u istcimaalaa koofiyadaha yaryar? Xullo ereyga aad rabto inaad beddesho. Labada InDesign iyo muujiye, fur daaqada Calaamadaha (Menu Window> Nooca> Calaamadaha). Tag geeska kore ee midig ee gudiga la yidhi guji astaanta na tusaysa falaar iyo khadadka jiifka ah. Markaad halkaa gaarto, dhagsii ikhtiyaarka "Koofiyadaha Yar Yar" (Ingiriisi ahaan, Koofiyado Yaryar).
U adeegso faallooyinka xoogga saar
Hadaad rabto inaad dhigato xoojinta erey gaar ah oo qoraalkaaga kamid ah, ha u isticmaalin xaraf weyn. Waxa saxda ah in la sameeyo waa in la adeegsado farta qoraalka.
Isticmaal jaantuska halkii aad ka isticmaali lahayd dhaashka caadiga ah
Sida caadiga ah, markaan ku riixno qoraalka kumbuyuutarkeena, midka soo baxa waa midka caadiga ah. Laakiin Erik Spierkermann ayaa inala talinaya isticmaal dhejiska ("em dash")maadaama ay u aragto dhererka hore inuu yahay mashquul. Waa maxay iskudhafyada furayaasha ah ee aan cadaadino si aan u gaarno? Si fudud u riix Alt oo ay weheliso furaha dhejiska ee ku yaal mac. On Windows, Ctrl + furaha furaha.
Xigashooyinka qalooca, fadlan
hay noocyada kala duwan ee xigashooyinka: rushooyinka, oo ah xigashooyinka toosan, xigashooyinka qalooca ee ina xusuusinaya tirooyinka 66 iyo 99; iyo xigashooyinka Isbaanishka. Sida caadiga ah, laga yaabee, markaad gujiso calaamadda oraahda, waxa dhabta ah ee aad heleyso waa kuwa dib loo dhigay. Sida loo codsado kuwa saxda ah Sawirka, tag faylka faylka> Dejinta Dukumintiga. Qeybta hoose ee daaqadda, guji xulashada calaamadaha oraahda Isticmaalka. Ka dib dooro luqadda aad ku qori doontid (kiiskeenna, Isbaanish) oo ku xulo astaanta u dhiganta xigashooyinka qalooca (kan ugu horreeya liiska hoos-u-dhaca). Si aad u dhamayso, taabo OK.InDesignHaddii aad leedahay mac, u gudub InDesign> Preferences> Qaamuuska. Haddii aad leedahay Windows, tag Tifatiraha> Xulashooyinka> Qaamuuska. Xullo luqad menu-ga luuqada, midka u dhigma. Kadib, xigashooyinka, xulo labo xigashooyin laba jibbaar Si aad u dhaqso badan oo raaxo leh, si aad u dhaqaajiso ama aad u joojiso xulashada xulashooyinka Adeegso xigashooyin caqli badan waa inaad riixdid furayaasha soo socda: Shift + Ctrl + Alt + '(Windows) ama Shift + Cmd + Alt +' (Mac).
Tirooyinka Elzevarian iyo tab
ka Tirooyinka Elzevarian Iyagu waa kuwa qaab-duug ah, ee sanduuqa hooseeya. Kuwani waxay ku habboon yihiin qoraalka si aad u fiican. Marka la isticmaalayo jajab tobanlaha, fiiro gaar ah waa in la siiyaa si loo waafajiyo, marka la eego liiska tirooyinka tiirarka, meelaynta dhibcaha (sida aad ku arki karto jaantuska). Si loo saxo booskeeda waxaa lagama maarmaan ah in la isku dayo in la soo bandhigo qodobbada lana tixgeliyo ballaca lambar kasta.
Had iyo jeer isticmaal ligatures
Latatures waxay wanaajisaa akhriska qoraal ah, sidaa darteed waa lagama maarmaan in la kiciyo markasta oo aan kari karno. Waxaa lagama maarmaan ah in horey loo sii ogaado in dhammaan noocyada qoraalku aysan oggolaanaynin isticmaalka kala-goysyada, maxaa yeelay iyagu ma fikiraan: waxay si gaar ah ugu dhacdaa xarfaha bilaashka ah, kuwaas oo iyaga ka maqan. awood ligatures InDesign? Xullo labada xaraf ee aad rabto inaad ku dhejiso jiljiska (tusaale ahaan, ff, tt, ft…). Fur guddiga astaamaha (Daaqad> Nooca> Dabeecadda) oo geeska kore ee midig waxaad ka heli doontaa fallaar xarriiqyo wata. Halkaa ku dhagsii oo dhaqaajiso ikhtiyaariyada Ligatures ligatures ee Sawirka? Xullo labada xaraf ee aad rabto inaad ku dhejiso xarigga (ff, tt, ft…). Fur nuuca Nooca Furan (Daaqada> Nooca> Nooca Furan). Haddii font-kaas uu taageerayo ligatures, waxaad awoodi doontaa inaad doorato astaanta ugu horreysa ee aad ku aragto guddigaas oo leh xarfaha fi.
Qoraal bidix leysku raacay, WALIGAA xaq looma yeelo
Xaqsoor qoraal Adeegsiga ikhtiyaarka sita magaca noocan oo kale ah ee aan ka heli karno barnaamijyo badan (InDesign, Illustrator, Word, PowerPoint is) waa go'aanka ugu xun ee qaab-qoraal ee aan sameyn karno. Waxa ay qabato waxay abuureysaa meelo cadcad oo qotodheer oo dhex-dhexaad u ah qoraalka loo yaqaan wabiyada. Waxay si taban u saameyneysaa akhrinta qoraalka, iyo waxyaabo kale.Waxaa naloogula taliyay, had iyo jeer, waa isticmaalka dhanka bidix. Gacan ku sameynta qoraal qiil leh waa hawl dhib badan taas oo cabirka bogga, tiirka, qaab qoraalka iyo qaabka xarafka laftiisa saameyn ugu yeesho; karti, shaqo sax ah oo kaliya xirfadlayaal yar ay si qurux badan u fulin karaan.
Ha u isticmaalin xarfo xarfaha liiska. Erik Spiekermann ayaa kugula talinaya isticmaalka dhibcaha, cabirka nagu habboon. Si aad u dalbato waxaad isku dayi kartaa isku dhafka muhiimka ah ee soo socda: • Alt + 8 (Mac), Alt + 0149 (Windows)
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Spiekermann 8-da Tilmaam ee nooca (Infographic)
Waxaan dareemayaa in tarjumaadda macluumaadka loo yaqaan 'infographic' uu leeyahay khaladaad qaarkood.
Jidka ragga, ogeysiiska "Isticmaalka buskudka" ayaa igu mashquulsan shaashadda kalabar mobilka.
Waxaan u maleynayaa in kudhaca macluumaadka, qodobka ugu dambeeya, uu ku talinayo xarfaha liiska, oo aan ahayn qodobbada;)
Cillad cilladaysan oo go'an, mahadsanid digniin ah!
Waan jeclahay miisaska / istiraatiijiyadaha! faahfaahin aad u fiican oo ku jira maqaalka :)
Kujawaab DAni Bcn
Isha; in kastoo taladiisu aad u wanaagsan tahay oo guud ahaan ansax tahay, Spiekerman wuxuu adeegsadaa heerarka higaadda ee Ingiriisiga. Waxaana jira khilaafaad xusid mudan; tusaale ahaan:
• Magaalada Castilian (ama Isbaanishka) kala saraynta darajooyinka oraahda ayaa bilaabmi doonta (tanina waa mid inta badan la iska indhatiro oo ay qorayaasha qaarkood u tixgeliyaan ikhtiyaar ahaan) calaamadaha oraahda "Latin", oo ay ku xigto (haddii ay tahay inaad dib u furto oraahda calaamadaha ka hor intaadan xirin tan hore "" Ingiriisiga ", ugu dambeyntiina (haddii ay ahayd inaad mar labaad dib u furto xigashooyinka markii saddexaad) waxaad isticmaali lahayd 'xigashooyin hal ah' Tusaale: Benito ayaa ku jawaabay: «markaa wuxuu igu yidhi 'waa inaad tagtaa' waana dhegaystay isaga».
• Farqiga kale (khiyaanada): Isbaanishka xariiqyada calaamadeeya qayb hoosaad —exact; «em dash» waxaa lagu magacaabaa dash, si fudud, ma ahan dash gaaban - waxaa la dhigaa iyada oo aan lahayn meel bannaan iyada oo la tixraacayo qoraalka qodob hoosaadka (-so- iyo maya -so-).
• Mid kale: Rasaasta ama rasaasta (•) runti waxaa loo adeegsadaa tirinta, laakiin barta la afuufay ama barta dhexe (·) looma isticmaalo.
Waan ogahay in waxyaabahan ay u muuqan karaan wax lala yaabo markii ugu horeysay ee la arko, laakiin xaqiiqda waxa dhacaya ayaa ah la'aanta aqoonta (ama xiisaha) ku saabsan qaabka loo yaqaan 'orthotypography' ayaa nagu hogaamineysa inaan sameyno oo aan u aragno sida caadiga ah waxa dhabta ah ee khaladaadka. Waxay noqon laheyd wax la mid ah, tusaale ahaan, qorida "Mejiko" ama "Vilvao" ama "hautomobil" ee "Mexico", "Bilbao" iyo "gaari" iyo, adigoo ku celceliya qaladka, kana dhigaya mid sax ah oo caadi ah (iyo Xaqiiqdii, haddii ay soo noqnoqoto muddo dheer oo faafto, way noqon kartaa, laakiin taasi waa arrin kale.)
Waxaa jira tiro (aan xad dhaaf ahayn, waa run) buugaag ku saabsan mowduucan (orthotypography); Wayna fiicantahay inaad xoogaa gacanta ku haysato hadaad, xitaa mararka qaarkood, ku lug leedahay ama aad xiisaynayso xirfadda noocyada qorista.
Mahadsanid Dani, aad baad ugu mahadsan tahay bixinta fikirkaas xiisaha leh. Oggolaanshahaaga, waxaan rabaa inaan sameeyo taxane taxane ah oo ku saabsan boostada iyadoo lagu saleynayo aqoontaada. Hal su'aal: haddii barta duulimaadka aan loo isticmaalin tirinta, maxaa loo adeegsadaa markaa?